Wareysi Gudoomiyaha Xisbiga Mucaaradka Puntland ee Ramaas Daahir Ciiro
Wareysi Gudoomiyaha Xisbiga Mucaaradka Puntland ee Ramaas, Daahir Ciiro.
Wareysi uu la yeeshay Maxamuud Cumar Bille, Daahir C/qaadir Muuse "Leedo" Gudoomiyaha Xisbiga Ramaas ee mucaaradka ah oo meelo badan taabanaya wuxuu u dhacay sida tan:
Daahir, waxaad tahay Gudoomiyaha Xisbiga Ramaas Puntland Political Party, maxay tahay macnaha uu u taagan yahay erayga ''Ramaas?
Walaal, waxaan kawadnaa hadii aanu ku guulaysano doorashada DGPL waxaanu ka dhigaynaa dalka oo dhan cagaar.
: See uga dhigaysaan, cagaar, ma waxaad ku beeray-saan geedo cagaar ah?
Marka aanu waxkasta hagaajino, sida dalka oo aan gaarsiino horumar ilaa heer aduunkoo dhan looga soo dalxiis tago wuxuu noqonayaa cagaar.
Daahir, Xisbiga, Ramaas yaa leh, ma beel ma, dad koox ah?
Ramaas waxaa leh Reer Puntland oo dhan.
Ramaas ma ku leeyahay taageerayaal dibbada?
Haa laakiin, ma badna?
Dabcan, waxaa muhiim ah cid uga olalaysa dibbada, marka cid ma idiin joogtaa?
Haa, Ingiriiska oo kale, waxaa noo fadhiya C/naasir Guure Faarax Jeer oo ah nin aad u firfircoon.
Dadku waxay ayaamahaan danbe isla dhexmarayaan Ramaas, waxa ku dhacay oo waa leydin la yahay meel aad ku damayseen, miyaa xisbigu socon la'yahay?
Maya, waxaanu ku jirnay diyaargarow xoogan oo aan ugu diyaar garoobayno doorashooyinka soo socda.
Waxaa nagu maqaalo ah in saddex xisbi oo kaliya la ogol yahay. mid dowladu leedahay iyo labo kale, een, isla mar ahaantaasn ay dowladu dejinayso nidaamka axsaabta, hadana ayba guddi u fadhiyaan oo aan laga gaari karin wakhti aad xisbi ahaan uga qeyb gashaan doorashada, arimahaas oo dhan ma, jiraan miyaa?
: Maya, dowlada xisbiyadu way ka madax banaan yihiin, weyna jirtaa in hadda guddi u fadhiyaan arimaha axsaabta, balse waxaa hadda doorashada lagu salayno waa qaabkii 1998 ee habka beelaha ama ergada.
miyey jiraan wax caqabado ah oo xisbigiinu ka socon la yahay?
Maya ilaa hadda dastuurka DGPL baa ogol axsaabta , aamuskayaga maal mahaan dambe wuxuu la xiriiraa marxalada dalka Soomaaliya oo gad-gadoomaysa oo aanu bal cagta u dhignay xamaasada xisbiga inta wax isbedelayaan.
Sidee u aragta Xisbiga Dr,. Gaboose ee Somaliland oo sheegay in uu taageersanyahay DFKM ee Soomaaliya?
Walaahi, waxaan u arkaa Dr. Gaboose nin maskax badan oo si sax ah u fakaraya, waayo sida kaliya ee maanta Soomaali isugu imaan karto waa sidaas.
Maamulka haatan talada haya DGPL ee uu madaxweynaha ka yahay Gen. Cadde Muuse Xirsi, sidee u aragtaa habka ay wax ku wadaan Ramaas ahaan?
Waxaan u aragnaa in ay dastuurkii oo dhan baal mareen?
Bal sharaxaad ka bixi?
Waxay la burburiyey hay'adihii Garsoorka, waxaa la dumiyey ciidankii dalka difaaci lahaa.
Daahir, yaad ku talin laheyd in uu dalka hogaamiyo?
Cidkasta oo cadaalad iyo sinaan ku maamusha. Soomaali horaa tiri' meeshaad nin ka qaadatid nin baad kaga tagtaa.
Maxaad ula jeedaa?
Yacni, hadaad, hab qoys ah ku shaqaysatid waxaad kala tagaysaan qoysaskii kaloo dhan, waxbana kuu socon maayaan. Hadaad ku shaqaysatid hab kooxaysina waxaad kala tagaysaan kooxo badan oo kale, marka waxa kaliya oo looga hortagi karo waa cadaalada oo la ilaaliyo.
Soomaalida waxaa lagu yaqaan cabasho badan oo cidna ma qancin karto ,wax kasta oo la siiyo, marka adinku' Ramaas ahaan cidkasta waad ka qancinaysaan waxkasta miyaa, mise un waxaad aragtaan god-daloolada maamulka hada shaqaynaya, oo wixii waa kor joogto turub wuxuu daawanayaa afar ta ciyaartoowba gacmahooda?
: Maya, waxaan aragnaa sida wax u socdaa ama dhacayaan marka in aanu saxno inta karaan kayaga ah waa nagu waajib.
Xisbiga' Ramaas, sidee u arkaa waxa ka dhacaya magaalada caasiimada ah ?
Waxaan u arkaa in Muqdisho ka dib 16 sano oo kooxo iyo qabiil ka talinayeen ay maanta heshay dowlad qaran oo loo dhan yahay ayna waliba iyagu waa dadka xamar degane hogaanka u hayaan.
: Dowladaan maxay kaga duwan tahay kuwii hore marka laga reebo erayga dhegaheena ku cusub ee Federaalka?
Waxyaalo badan, sida aqoonsiga, waayo waxaa aqoonsan dhamaan beesha caalamka.
: soo tan dowladaha ku jira EU-da ama Midowga Yurub iyo kuwa ka mid ah Jamacada Carabta ama Urur Goboleedka Geeska Afrika ay ka caga jiidayaan, sida wax loo wado, ma Maraykankaa taageersan baad leedahay?
EU-da waxay ka soo horjeedaa, U.S political Domination on Somalia(wax ay ugu yeeraan ) oo awal waxay isku hayeen Maraykanka Global Domination ama Dominance waxa afka qalaad loogu yeero, marka looma qaban karo in ay dan u wadaan Soomaalida ee waa maxaad iiga baday sxb-tinimada Soomaalida.
Aad baad u mahad-san tahay:
Kaasi wuxuu ahaa Gudoomiyaha Xisbiga mucaaradka ah ee Ramaas Puntland Political Party aan wareysi la yeeshay.
Maxamuud Cumar Bille:
Faafin: May 18, 2007
Wareysi Musharaxa Madaxweynaha DGPL, Mudane Colaad Maxamed Siciid
Waraysiga oo uu la yeeshay Maxamuud Cumar Bille Akhri